Fifandraisana tapaka - Fiangonan'Andriamanitra maneran-tany Suisse
haino aman-jery > Mifantoha amin'i Jesosy > Mifantoha amin'i Jesosy 2019-04 > Fifandraisana tapaka
Ny iray amin'ireo olana lehibe indrindra ao amin'ny fiarahamonina tandrefana dia ny fifandraisana tapaka - ny fisakaizana izay lasa tezitra, ny fampanantenana izay tsy nohazonina, ary ny fanantenana diso fanantenana. Betsaka ny nisara-panambadiana na efa za-draharaha amin'ny fisarahana. Niaina fanaintainana sy korontana teo amin'ny tontolo tsy voahozongozona isika. Mila mianatra isika, tsy matoky tena foana ny manam-pahefana sy ny birao ary ny olona ihany no mikarakara ny tenany.
Maro amintsika no mahatsiaro ho very ao anatin'ny tontolo hafahafa toy izany. Tsy haintsika hoe avy aiza isika, na aiza isika, na aiza na aiza, na ho aiza, na ho aiza isika. Miezaka manara-maso ny zava-doza amin'ny fiainana araka izay tratry ny herinay izahay, toy ny fandehanana amin'ny sehatry ny toeram-pitrandrahana iray, tsy mampiseho ny fanaintainana tsapantsika ary tsy fantatsika na misy dikany ny ezaka ataontsika sy ny fiainantsika.
Mahatsiaro ho irery izahay ary miezaka miaro ny tenantsika. Misalasala ny hanolo-tena amin'ny zavatra rehetra isika ary mino fa tsy maintsy mijaly ny olona satria tezitra Andriamanitra. Ny hevitr'Andriamanitra dia tsy misy dikany amin'ny tontolo ankehitriny - ny marina sy ny diso dia fiheverana fotsiny, ny ota dia hevitra efa tranainy ary ny fahatsapana fanamelohana dia famelomana ho an'ny mpitsabo.
Namaky ny momba an'i Jesosy ao amin'ny Baiboly ny olona ary tonga ny fiheverana fa niaina fiainana ivelan'ny olombelona izy, nanasitrana ny olona tamin'ny fanamafisana azy ireo fotsiny, nanao mofo tsy nisy na aiza na aiza, nandehandeha rano, voahodin'ireo anjely miaro ary manasitrana ny vatana , Tsy misy ifandraisany amin'ny tontolo ankehitriny. Torak'izany ihany koa, ny tantaran'ny hazo fijaliana nataon'i Jesosy dia toa esorina amin'ny olana eo amin'ny fiainana ankehitriny. Vaovao mahafaly ny fitsanganany tamin'ny maty, fa nahoana aho no tokony hieritreritra izany hoe vaovao ho ahy izany?
Jesosy niaina an'izao tontolo izao
Ny fanaintainana tsapantsika ao amin'ny tontolo tsy fantatra dia mitovy amin'ny karazana fanaintainan'i Jesosy. Izy dia namadika ny oroka tamin'ny iray amin'ireo mpianatra akaiky indrindra ary nanararaotra ny manampahefana. Fantatr'i Jesosy hoe manao ahoana ny hatsikana amin'ny andro iray ary naneso ny ampitson'iny. Ny zanak'olo-mpiray tam-po an'i Jesosy, Jaona Mpanao Batisa, dia novonoin'ny mpitondra notendren'ny Romana i Jaona satria nampiharihary ny tsy fahaiza-miaina ara-moraly nataon'ny mpitondra. Fantatr'i Jesosy fa hovonoina koa izy satria nanontany ny fampianarana sy ny toeran'ny mpitondra ara-pivavahana jiosy. Fantatr'i Jesosy fa hankahala azy ny olona raha tsy misy antony ary ny naman'ny naman-dratsy no hanohitra azy. Ny karazan'olona izay mijanona ho mahatoky amintsika na dia mankahala aza dia sakaiza marina, mifanohitra amin'ny mpamadika.
Toy ny olona latsaka tao anaty renirano izahay ary tsy afaka milomano. Jesosy dia ilay olona nitsambikina tao anaty rano mangatsiaka mba hanampy antsika. Fantany fa hanao araka izay fara herintsika isika mba hihazonana azy. Saingy ao anatin'ny fiezahana mafy hampitraka ny lohantsika, isika manosika azy ao anaty rano.
Jesosy dia nanao izany an-tsitrapo mba hampisehoana antsika fomba tsara kokoa. Angamba isika afaka matoky io lehilahy io, dia i Jesosy - satria vonona ny hanome ny ainy ho antsika izy, fony isika fahavalony, tsy mainka ve isika afaka matoky azy rehefa namany isika?
Afaka milaza amintsika momba ny fiainana i Jesosy, avy amin'ny toerana niaviantsika sy izay alehantsika ary ny fomba tokony hahatongavana any. Afaka milaza zavatra amintsika izy momba ny loza ateraky ny fiarahana izay antsointsika fa fiainana. Tsy mila matoky azy be loatra isika - afaka manandrana kely fotsiny isika mba hahitana raha mandeha izany. Raha manao an'izany isika dia mitombo ny fahatokiantsika. Raha ny tena marina dia heveriko fa ho marina foana izy.
Matetika isika dia tsy mila namana izay mahitsy foana. Manelingelina. Jesosy dia tsy karazan'olona izay milaza foana hoe "efa nolazaiko anao". Niondrika anaty rano fotsiny izy, nanohitra ny ezaka ataonay mba hilentehana azy, hisintona antsika mankany amoron'ny renirano ary hamela antsika hofona. Ary andao isika mandra-panotantsika zavatra tsy mety indray ary latsaka ao anaty renirano. Farany, mianatra manontany Azy isika hoe aiza ny loza mahatafintohina ary aiza ny ranomandry manify ka tsy mila voavonjy matetika isika.
Manam-paharetana i Jesosy. Mahatonga antsika hanao fahadisoana izy ary mahatonga antsika hijaly hatrany amin'ireo hadisoana ireo. Avelany hianatra isika - saingy tsy mandositra mihitsy izy. Mety tsy azontsika antoka fa misy fa misy, saingy afaka mahazo antoka isika fa ny faharetana sy ny famelan-keloka dia miasa tsara lavitra noho ny hatezerana sy ny fampisarahana rehefa misy fifandraisana. Jesosy dia tsy variana amin'ny fisalasalana sy tsy fahatokisana ananantsika. Fantany ny antony mahatonga antsika tsy hitoky.
Jesosy dia miresaka momba ny fahatanterahan'ny fahafinaretana, fifaliana, tena maharitra ary maharitra izay tsy lanja, ny olona tena tia anao, na dia fantany aza ny toetranao. Natao ho an'ny fifandraisana izahay, izay no antony ilantsika azy ireo ary izany no atolotry i Jesosy antsika. Tiany isika hanatona azy amin'ny farany ary hanaiky ny fanasana maimaimpoana amin'ny fety sambatra sy milamina.
Manana fiainana mialoha azy isika izay mendrika hiaina. Izany no antony naharetan'i Jesosy tamim-paharetana ny fanaintain'ity tontolo ity mba hampisehoana tontolo tsaratsara kokoa. Toy ny hoe eny an-tongotra mankany an-tany foana tsy misy farany isika ary tsy mahalala ny lalana tokony hatao. Nandao ny fampiononana sy ny fiarovana ny paradisa tsara tarehy i Jesosy mba hanakanana ny fasika ary hanehoana antsika fa raha manova lalana fotsiny isika ka manaraka azy, dia hanome antsika izay rehetra tadiavintsika izy.
Lazain'i Jesosy amintsika koa ny toerana misy antsika. Tsy any amin'ny paradisa izahay! Maharary ny fiainana. Fantatsika izany ary fantany ihany koa. Niaina izany. Izany no antony itiavany antsika hiala amin'ity korontana ity sy ahafahantsika miaina fiainana be dia be izay nokasainy ho antsika hatramin'ny voalohany.
Ny fatoram-pianakaviana sy ny finamanana no roa amin'ireo fifandraisana mahafinaritra sy mahomby indrindra eo amin'ny fiainana rehefa mandeha tsara izy ireo - saingy indrisy fa tsy mandeha tsara izy ireo ary izany no iray amin'ireo olana lehibe indrindra mahazo antsika.
Misy fomba mahatonga fanaintainana ary misy fomba iray mampiroborobo ny fahafinaretana sy ny fifaliana. Indraindray isika miezaka manalavitra ny fanaintainana sy ny fifaliana. Ka mila mitari-dalana isika rehefa miady amin'ny lalana mankany an-tany efitra tsy misy lalan-kely. Miandrasa kely - misy ny sasany - ny tsikitsin'i Jesosy izay mampiseho fomba fiaina hafa. Ho tonga any amin'izay misy azy isika raha manaraka ny diany.
Ny Mpamorona dia maniry ny hifandraisantsika aminy, ny fisam-pitiavana sy ny fifaliana, saingy tsy hita sy matahotra isika. Namadika ny Mpamorona izahay, niafina ary tsy nety niaraka taminy. Tsy nosokafanay ny taratasy nalefany. Ka Andriamanitra tao amin'ny nofo dia tao amin'i Jesosy mba hilazana amintsika fa tsy tokony hatahotra isika. Namela antsika izy, nanomana zavatra tsara kokoa ho antsika, tiany ny hiverina any an-tranony, izay mahatsiaro tena milamina.
Novonoina ny mpitondra ny hafatra, saingy tsy nahasintona ny hafany izany. Manome namana sy famelan-keloka mandrakariva i Jesosy. Velona izy ary tsy vitan'ny mampiseho antsika ny lalana ihany, fa koa mandeha miaraka amintsika ary hamono anay hiala ny rano mony raha latsaka ao isika. Izy no hiaraka aminay hamakivaky sy matevina. Izy dia miahy ny fahasalamantsika sy ny faharetantsika hatramin'ny farany. Afaka miantehitra aminy isika, na dia tsy mahavita antsika aza ny olon-drehetra.
Miaraka amin'ny namana iray toa an'i Jesosy, dia tsy mila matahotra ny fahavalonao ianao. Manana ny hery sy ny hery rehetra eo amin'izao rehetra izao izy. Mbola manasa ny olona rehetra ho any amin'ny fety fihinany izy. Manasa anao manokana Jesosy amin'ny fety any amin'ny paradisa i Jesosy. Nivoaka avy eo izy mba hitondra anao ny fanasana. Novonoina noho ny fahasahiranany izy, nefa tsy manakana azy tsy hitia anao. Ahoana ny aminao Angamba mbola tsy vonona mino ianao fa misy olona afaka mivadika be. Takany fa ny zavatra niainanao dia mahatonga anao tsy hisalasala loatra momba ireo fanazavana ireo. Afaka matoky an'i Jesosy ianao! Andramo izany. Hiditra amin'ny sambony. Afaka mitsambikina ianao any aoriana raha tianao, saingy heveriko fa te hijanona ianao ary amin'ny fotoana iray dia hanomboka hikorontana ny tenanao ianao hanasa olona milomano amin'ny sambo.